दुग्ध उत्पादनमा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब लगानी
भैरहवा, वैशाख २१ गते । किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, रूपन्देहीले पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि दूध उत्पादन बढेको छ । दूध उत्पादन वृद्धिसँगै बजारीकरणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएकाले रूपन्देहीमा निजी क्षेत्रको लगानी मात्रै १५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत पहाडी जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रममध्ये अर्घाखाँची, गुल्मी, प्यूठानमा दूध उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । उन्नत बीउमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन थालिएको कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यान्नमा विभिन्न उन्नत जातका बीउ उत्पादनसँगै उन्नत जातका पशुपालनमा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
बजार तथा सडक सञ्जाल नजिक रहेका साना पशुपालक किसानको सङ्ख्या बढाउने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको पशुपालन संवाहक संयोजक डा. श्रीराम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । गाई भैँसीपालनलाई थप चार हजार घरधुरीमा विस्तार गरेर थप ८५ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा नेपालमा दूध उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा पहाडी जिल्लामा यो अभियानले दूध उत्पादन वृद्धि गर्न थप मद्दत मिलेको उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय दूध उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै बजारीकरणमा चुनौती थपिएपछि बजारीकरणबारे पनि आवश्यक काम अगाडि बढाउन थालिएको छ । बजारीकरण गर्ने क्रममा कार्यक्रमले पशुपालक किसानका अतिरिक्त डेरी व्यवसायीलाई पनि सहयोग गर्दै आएको छ । तीन वर्षभित्र मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन बढाई प्रशोधन तथा बजारीकरणमार्फत किसानका लागि उन्नत बीउ बिजनले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख कौशलकुमार पौडेलले दूध उत्पादन क्षेत्रदेखि बजारीकरणका लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा कार्यालयले पहल गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा उत्पादन मूल्य कसरी घटाउने तथा उत्पादन कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिइनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । कार्यालयले किसानका अतिरिक्त डेरी व्यवसायीसम्म कार्यक्रम पु¥याएको उल्लेख गर्दै पौडेलले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका जिल्लामा सकारात्मक प्रतिफल देखिन थालेको बताउनुभयो ।
किसानका लागि उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय रूपन्देहीका उपप्रमुख तुल्सीराम भण्डारीले कार्यालयमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम दूधमा आत्मनिर्भर गराउन फलदायी बनेको दाबी गर्नुभयो । उत्पादन बढेसँगै उपभोक्तामाझ कसरी गुणस्तरीय दूध उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिइनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
स्थानीय उद्यमशीलता तथा संस्थागत विकास संवाहक संयोजक डा. हरि शर्मा न्यौपानेले दूध उत्पादन तथा बजार विस्तारका लागि बहुसरोकारवाला संयन्त्रका माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भएका सरकारी कार्यक्रम बढी उपलब्धिमूलक देखिने हुँदा दुग्ध पदार्थको बजारीकरणमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन दूध उत्पादन बढाउनदेखि बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष मेघराज भण्डारीका अनुसार हाल नेपालमा दैनिक ४६ लाख ६० हजार लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । केही वर्षयता दूध उत्पादनमा ३.२२ प्रतिशत वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा चार लाख ५० हजार परिवार प्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादनमा संलग्न रहेको र उद्योग स्तरमा २० हजारले रोजगारी पाएको भण्डारीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रुपियाँ लगानी छ । हाल दूधबाट मात्रै दैनिक तीन करोड रुपियाँ सहरबाट गाउँ जाने गरेको पनि भण्डारीको बताउनुभयो ।